काठमाडौंमा ५२ वर्षपछि देखिएको चरो- विचार - कान्तिपुर समाचार
बेलन्स क्रेक एकदम लजालु स्वभावको हुनाले हम्मेसि फोटो खिच्न सकिन्न । यसको गुँड र बचेराको फोटो खिच्न पाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
कार्तिक ४, २०७७ कमल मादेन
ब्रायन हड्सन इस्ट इन्डिया कम्पनीको कारिन्दाका रूपमा सन् १८२० मा नेपाल आएका थिए । २३ वर्ष नेपाल बसाइका क्रममा उनले कम्पनीलाई यताको राजनीति लगायतबारे जानकारी अद्यावधिक गराउने काम त गरे नै, धेरै निजी सोख पनि पूरा गरे ।
तीमध्ये एक थियो– चरासम्बन्धी अध्ययन । उनले नमुना संकलन गरी यहाँका चराबारे विश्वलाई जानकारी गराए । त्यसपछि उनी सिक्किममा १५ वर्ष बसे । उनले सन् १८२०–५८ भित्र ६७२ प्रजातिका चराका ९,५१२ नमुना संकलन गरे । तीमध्ये १२४ प्रजाति विश्वका निम्ति नयाँ थिए । ‘दी ओरिजिन अफ हिमालयन स्टडिज’ (सन् २००५) शीर्षक पुस्तकमा रहेको क्यारोल इन्सिकिपको ‘अ पायोनियर अफ हिमालयन अर्निनोथोली’ लेखअनुसार, हड्सन आफैंले १२४ मध्ये ८० प्रजातिका चराबारे व्याख्या गरेका थिए । हड्सनद्वारा संकलित नमुनाबाटै इडवार्ड ब्लिथ, जर्ज रोबर्ट ग्रे र जोन इडवार्ड ग्रे (द ग्रे ब्रदर्स) तथा जोन गोउल्डले ४४ प्रजाति पत्ता लगाए ।
हड्सनको जमानामा चराको तस्बिर खिच्ने प्रविधि थिएन । नमुनाकै आधारमा चराको अध्ययन हुन्थ्यो । अचेल फोटोले त्यो कामलाई केही हदसम्म सरल बनाएको छ । अहिले नयाँ पत्ता लागेका बाहेक अन्य चराबारे जानकारीका लागि नमुना चाहिन्न, सम्बन्धित ठाउँमा खिचिएको फोटो भए पुग्छ । फोटोबाटै चरा प्रजाति थपिएको वा दशकौंपछि पुनः फेला परेको पुष्टि गर्ने चलन छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त युगमा अचेल डीएनए तहको अध्ययन गरेर चरा पहिचान र पुनः वर्गीकरण गरिनुपर्ने हो । डीएनएको सिक्वेन्सिङबाट एकै जाति अन्तर्गतका प्रजातिहरूबीच कुन के कति मिल्दोजुल्दो छ, तिनीहरू कति हजार वा लाख वर्षपहिलेदेखि एकअर्काबाट फरक देखिन थालेका थिए भन्ने अध्ययन गरिनुपर्ने हो । यसतर्फ नेपालका चराविज्ञहरू पाइला चाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चराको अध्ययन–अनुसन्धान हामीकहाँ अझै हड्सनकालीन विधिमै केन्द्रित छ ।
बेलन्स क्रेक नेपालका लागि आगन्तुक र बटुवा चरा हो । छ–सात इन्च लामो हुने यो मूलतः झाडी भएको सिमसार क्षेत्रमा विचरण गर्ने एक प्रजातिको सिमकुखुरा हो । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनले प्रकाशन गरेको ‘द स्टेट्स अफ नेपाल्स बर्ड्स ः द नेसनल रेडलिस्ट सेरिज’ (सन् २०१६, भोलम २) शीर्षक पुस्तकअनुसार, बेलन्स क्रेक नेपालमा सर्वप्रथम ब्रायन हड्सनले सन् १८२९ मा फेला पारेका थिए । त्यस बेला काठमाडौंमा मेदेखि अक्टोबरसम्म यो देखिन्थ्यो । तराईमा भने मार्चमै पाइएको हड्सनले लेखेका छन् । जे स्कलीले सन् १८७९ मा नेपालमा यो चरा जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म जताततै देखिन्छ भनी उल्लेख गरेका छन् । आरएल फ्लेमिङले सन् १९६१ मा चोभार दक्षिणतर्फ रहेको टौदहमा देखेका थिए । हरिशरण नेपालीले सन् १९६८ मा यो चराको नमुना बालाजुबाट संकलन गरेका छन् ।
बेलायती संस्था विकास लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (डिफिड) का नेपाल प्रमुख मार्क मल्लेइयुले काठमाडौं उपत्यकाका चराबारे सन् २००४–६ मा अध्ययन गरेका थिए । उनले बर्ड सोसाइटी अफ नेपाललाई बुझाएको ‘काठमाडौं बर्ड रिपोर्ट’ (सन् २००९) मा बेलन्स क्रेकबारे एक वाक्य लेखेका छन् । त्यसअनुसार, हेमन्त गुरुङले अप्रिल २००६ मा यसको बचेरालाई एउटा घरको छानोमा देखेका थिए । उक्त कुरा गुरुङले डच नागरिक एरेन वान रिेसेनलाई बताएका थिए । यही कुरा एरेनले मार्कलाई सुनाएका रहेछन् ।
वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सञ्जय था श्रेष्ठ, चुङ्बा शेर्पा, सुविन श्रेष्ठ लगायतले बेलन्स क्रेकलाई भक्तपुरमा ५ अक्टोबर २०२० मा पहिलोपटक फेला पारे । एक जोडी बेलन्स क्रेकसँग अलि अघिपछि हुर्किसकेको एउटा बचेरा पनि देखिन्थ्यो । श्रेष्ठ र शेर्पाले त्यसलाई बेलन्स क्रेककै बचेरा भन्ठाने । तर फेरि, यो बचेरा झन्डै बेलन्स क्रेकको माउ जत्रै र यसका आँखा र खुट्टाको रङ बेलन्स क्रेकको भन्दा फरक देखिएकाले श्रेष्ठ र शेर्पालाई त्यो बेलन्स क्रेक होइन कि भन्ने लागेछ । क्रेक समूहको चराका आँखाको नानी कालो र यसको वरिपरि हल्का रातो घेरा हुन्छ । तर, त्यो तस्बिरमा आँखाको नानीवरिपरि स्पष्ट त्यस्तो घेरा देखिन्न । यस्ता आँखा त बेलन्स क्रेक सम्मिलित चरा परिवार र्‍यालिडीको ह्वाइट–ब्रेस्टेड वाटरहेनको हुन्छ । तर, त्यो बचेराको घाँटीको आकार र रङ ह्वाइट–ब्रेस्टेड वाटरहेनसँग बिलकुलै मिल्दैन । त्यसैले त्यो बचेरा बेलन्स क्रेक वा अन्य कुन प्रजातिको हो स्पष्ट भन्न सकिन्न । तर, चरा विज्ञ तथा जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन नेपाल शाखा प्रमुख डा. हेमसागर बराल त्यो बेलन्स क्रेककै बचेरा रहेको दाबी गर्छन् । उनको बुझाइमा बचेराका आँखाको रङ वयस्कको भन्दा फरक हुन्छ ।
बचेराबाट चराको प्रजाति निर्क्योल गर्न हम्मेसि सकिन्न । यसकारण, हेमन्त गुरुङले सन् २००६ मा छानोमा देखेको बचेरा बेलन्स क्रेककै हो भन्नु सही हुँदैन । यसको अर्को कारण घरनजिक बेलन्स क्रेक विचरण गर्दैन । बरु घरनजिक त ह्वाइट–ब्रेस्टेड वाटरहेन देखिन्छ । जे होस्, श्रेष्ठ लगायत काठमाडौं उपत्यकामा बेलन्स क्रेको तस्बिर खिच्न सफल भए । हरिशरण नेपालीपछि काठमाडौं उपत्यकामा बेलन्स क्रेक पाइने प्रमाण ५२ वर्षको अन्तरालमा प्राप्त भएको छ । हुन त वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर तथा नेपालका चराबारे जानकार हटन चौधरीले सन् १९९९ मा सुनसरीको रामधुनीमा बेलन्स क्रेक देखेका थिए । आईयूसीएन रेड लिस्ट अफ थ्रेटेन्ड सेरिजमा सन् २०१९ मा प्रकाशित एक जानकारीअनुसार, यो चरा अफ्रिका र अस्ट्रेलिया नजिकका एसियन भूभागमा आगन्तुक मानिन्न । तर, युरोप र एसियाका अन्य भागमा आगन्तुक अर्थात् माइग्रेटोरी प्रकृतिकै हुन्छ । यो चरा अगस्ट अन्ततिरदेखि अक्टोबरसम्म दक्षिणतिर बसाइँ सर्ने र मार्चदेखि मेसम्म उत्तरतर्फका बचेरा कोरल्ने ठाउँमा फिर्छ ।
डा. हेमसागर बराल भन्छन्, ‘चरा जहाँ टार्गेट गरेर जुन ठाउँका लागि बचेरा कोरल्न जान्छ, त्यहाँ कहिले ठ्याक्क सिजनमा पुग्न नसक्ने र कतिपय समयमै पुगे पनि पहिलेको बासस्थान नहुने हुनाले केही चराले जहाँ उपयुक्त स्थान पायो, त्यहीँ गुँड बनाएर बचेरा काढिहाल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ ।’ यसले गर्दा कतिपय चराको ‘स्टेट्स’ पहिलेभन्दा अहिले परिवर्तन हुँदै गएको छ । डा. बरालका अनुसार, नेपालका कतिपय चराको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने भइसकेको छ । क्यारोल इन्सिकिप र टिम इन्सिकिपको अनुमानमा नेपालमा बेलन्स क्रेकले बच्चा कोरल्न सक्छ ।
जर्मनीका पिटर सिम्सन पल्लासको सन् १७७६ को ‘मिस्सेलानिया जुलोजिका’ शीर्षक पुस्तकमा बेलन्स क्रेक ‘डिस्कोभर्ड’ गरिएको जानकारी छ । यसको प्रोटोनिम अर्थात् ‘डिस्कोभर्ड’ गरिँदाको वैज्ञानिक नाम र्‍यालस फ्युजिल्ला थियो । त्यसपछि यसलाई पोर्जाना फ्युजिल्ला भन्ठानियो । सन् २०१४ मा पोर्जाना जातिबाट यसलाई जापोर्निया जातिमा स्थानान्तरण गरिएको छ । अचेल यसको वैज्ञानिक नाम जापोर्निया फ्युजिल्लामा मानिन्छ । यसको अंग्रेजी नाम बेलन्स क्रेकचाहिँ फ्रान्सका महान् प्रकृतिविद् लुइस एन्टोनी फ्रान्कोइज बेलनको नाममा राखिएको हो ।
चरा परिवार र्‍यालिडीअन्तर्गत सानो कुखुराजस्तो ठुँडो, छोटो कोनिकल आकार र पुच्छर छोटो भएको चरालाई क्रेक भन्ने गरिन्छ । जापोर्निया जातिअन्तर्गत दस प्रजाति क्रेक अस्तित्वमा छन् । नेपालमा बेलन्स क्रेकबाहेक अरू चार प्रजाति क्रेकमा सूचीकृत छन् । तिनीहरू कुनै हिउँदमा देखिन्छन् त कुनै स्थानीय आवासीयकै रूपमा पाइन्छन् । ब्राउन क्रेक र रुडी–ब्रेस्टेड क्रेक बेलन्स क्रेकजस्तै देखिन्छन् । जापोर्निया जातिअन्तर्गत तीन प्रजातिका क्रेक लोप भइसकेका छन् । एउटा लेखअनुसार, बेलन्स क्रेकले बेलायतको सिमसार क्षेत्रमा उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर बचेरा कोरल्छ होला भन्ने अनुमान निकैपटक गरिएको थियो । तर, सन् २०१३ मा मात्र यसको गुँड भेटियो । नेदरल्यान्डसहित युरोपका कतिपय देशमा यसले उल्लेख्य मात्रामा बचेरा कोरलेको भेटिएको छ । यो एकदम लजालु स्वभावको भएकाले हम्मेसि फोटो खिच्न सकिन्न । यसको गुँड र बचेराको फोटो खिच्न पाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । सिंगापुरका वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर इरिक टानका अनुसार, बेलन्स क्रेक सिंगापुरका निम्ति अत्यन्तै विरलै देखिने हिउँदे आगन्तुक हो । त्यहाँ चार वर्षयता देखा परेको छैन ।
बेलन्स क्रेक अन्य चराझैं उचाइमा उड्न सक्दैन । पखेटाको बनावट हेर्दा यसले एकैपटक लामो दूरी उडान गर्दैन । तर पनि यो चरा एसियाका विभिन्न भागबाट हिउँदमा दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसिया पुग्छ । युरोपबाट अफ्रिकाको उत्तरी भेगसम्म जान्छ । यसले बसाइँ सर्ने क्रममा एक दिनमा कति किलोमिटर यात्रा गर्छ होला ? सिमसार क्षेत्र खोज्दै यात्रा गर्छ वा अन्य बाटो भएर पनि यात्रा तय गर्छ ? यस्ता यावत् जानकारी पाउन सकिएको छैन । १२५ जति देशमा अत्यन्त थोरै संख्यामा पाइने बेलन्स क्रेकका छ उप–प्रजाति छन् । दक्षिणपूर्व एसियाको उप–प्रजाति जापोर्निया फ्युजिल्ला फ्युजिल्ला हो भनिन्छ । नेपालसहित दक्षिण एसियाको बेलन्स क्रेक कुन उप–प्रजाति होला ?
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७७ ०८:२६
आलोचनापछि सांसदले फिर्ता गरे दसैंभत्ता
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि दसैंभत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने
कार्तिक ४, २०७७ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — व्यापक आलोचना भएपछि सत्तारूढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले दसैंभत्ताबापत बुझेको रकम फिर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले पनि दसैंभत्ताबापतको एकमुष्ट रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जिम्मा गर्ने भएका छन् ।
संघीय संसदन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी र सांसदका लागि मात्रै दसैंभत्ताबापत करिब २ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालय पठाएको थियो । सचिवालयले उक्त रकम सांसदको खातामा असोज अन्तिममा जम्मा गरिदिएको थियो । सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूलाई पनि दसैंभत्तासहितको रकम दिइएको थियो । यहीबीचमा सरकारले भने कोरोना परीक्षण र उपचार नागरिक आफैंले (अशक्त, असहायबाहेक) गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सांसदहरूलाई दसैंभत्ता बाँडिएको खबर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचना सुरु भएको थियो । त्यसपछि आफूलाई जानकारी नदिई संसद् सचिवालयले खोलेको खातामा दसैंभत्ताबापतको रकम जम्मा गरिदिएको भन्दै केही सांसदले फिर्ता गर्न थालेका थिए । केहीले आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट भत्ताबापतको रकम काट्न भनेर सचिवालयलाई पत्र लेखेका थिए ।
सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका पदाधिकारी सोमबार बिहानदेखि नै दसैंभत्ताबापत आएको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने छलफलमा लागेका थिए । सरकारले जनता मारमा परेका बेला आफूहरूलाई दसैंभत्ता पठाएको र सार्वजनिक रूपमा बदनाम गराएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यस्तो परिस्थिति आएपछि संसदीय दलले संयुक्त रूपमा दसैंभत्ताबापतको रकमको उपयोग गर्ने जुक्ति निकालेको थियो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलका सांसदहरूलाई प्राप्त रकम सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्न गठन गरिएको कोषमा राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘दुवै सदनका दलका अधिकारीबीच भएको छलफलपछि दसैंभत्ताबारे निर्णय गरिएको हो । माननीयहरूले व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता गर्नेभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गर्न छलफलमा थियौं,’ उनले थपे, ‘कोरोना महामारीका बेला दसैं साधारण ढंगले मनाउने भनेर दसैंभत्ता कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्ने निर्णय गरेका हौं ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका नेकपाका सांसदहरूलाई दसैंभत्ताबापत १ करोड २६ लाख ७६ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ गएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सांसदहरूलाई दसैंभत्ता दिने सरकारको निर्णय उचित नभएको बताएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कोरोना महामारीले उत्पन्न विषम परिस्थितिमा आम नेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेका बेला जनप्रतिनिधिलाई दसैंभत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक नभएकाले आफ्ना सांसदहरूलाई उपलब्ध दसैंभत्ताबापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसरी फिर्ता गरिएको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्ने निर्णय भएको उनले बताए । दसैंभत्ताबापत कांग्रेसका सांसदहरूले ४३ लाख २० हजार ८ सय १० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले पनि दसैंभत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको समयमा यस किसिमको भत्ता नलिने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको खातामा दसैंभत्ताबापत २२ लाख ५१ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ जम्मा गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सांसदहरूले दसैंभत्ता फिर्ता गर्ने सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका बेला कुनै प्रतिक्रिया नदिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने नेकपा, कांग्रेस र जसपालगायत दलले दसैंभत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेपछि विज्ञप्ति निकालेका छन् । उनले दसैंभत्ताबारे आएका टीकाटिप्पणीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सरकारको गत वर्षको निर्णयले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाका सन्दर्भमा देशको हालको संकटपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णयप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको अवस्थामा यस कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनले पनि दसैंभत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पनि दसैंभत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने जनाएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले दसैंभत्ताबापत जनही ६८ हजार ३ सय २० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । उपाध्यक्ष दाहालले भने ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ प्राप्त गरेकी थिइन् । संसदका पदाधिकारी र सांसदहरूलाई एक महिनाको तलब बराबर दसैंभत्ता दिइएको हो । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको भन्दा कम छ । सभामुख र अध्यक्षको तलब पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले उनीहरूको तलब कम हुन गएको हो ।
सांसदका स्वकीय सचिव तथा सहयोगीहरूको खातामा गएको दसैंभत्ताबारे भने दलहरूले केही बोलेका छैनन् । यसबारे सांसदहरूले पनि केही भनेका छैनन् । प्रत्येक सांसदले कम्तीमा एक जना शाखा अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । सांसद तथा पदाधिकारीको पदअनुसार स्वकीय सचिवको संख्या हुने भएकाले कति जना त्यस्ता कर्मचारी छन् भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सांसदका स्वकीयको तलब ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पनि असोजको पारिश्रमिकसँगै जम्मा भएको दसैंभत्ता कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यस वर्षको दसैंभत्ताबापत आएको रकम कोरोना कोषमा राखेर यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने निर्णय भएको छ ।’ उनले प्रदेशका सरकारहरूलाई पनि कोरोना कोषमा दसैंभत्ताबापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७७ ०८:२०